National Power News:: सरकार ! कामका लागि दुवइ जान साँढे चार लाख लाग्ने हाे ? National Power News:: सरकार ! कामका लागि दुवइ जान साँढे चार लाख लाग्ने हाे ?
सरकार ! कामका लागि दुवइ जान साँढे चार लाख लाग्ने हाे ?
वैदेशिक राेजगारीमा म्यानपावर कम्पनीहरूकाे मनलाग्दी, सरकार रमिते !
१४ माघ (काठमाडाैँ) – सरकारले दुई बर्ष अघि मलेशिया लगाएत खाँडी मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जानेहरुसंग सेवाशुल्क वापत १०००० रुपैयाँ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा म्यानपावर कम्पनीहरुले आन्दोलन गरे पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थिएन । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले केही राहतको सास फेरेका थिए ।
तर सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको अनुगमन कत्तिको भैरहेको छ सायद सरकारलाई नै थाहा छैन होला । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट म्यानपावर कम्पनीहरुले मनलाग्दी पैसा असुली रहेको छ । खाँडी मुलुक जानेहरुबाट अधित्तम १०००० सम्म सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय सरकारले गरे पनि खुलमखुल्ला रुपमा मनलाग्दी पैसाको वार्गेनिङ हुने गरेको छ ।
भर्खरै मात्र सिनामंगल स्थित डुयल्स्को म्यानपावर कम्पनीले दुवैको लागि महिला र पुरुष गरी २०० जना सेक्युरीटी गार्डको कोटा ल्याएको थियो । PSBD मा ल्याइएको कोटामा कामदारहरुको लागि करिब २७५० युएइ दिराम तलब तोकिएको थियो । यहि २७५० दिराम तलब भएको भन्दै मासिक ३३०० दिराम सम्म कमाउन सकिने आश्वासन दिएर उक्त म्यान पावर कम्पनीले छानौट भएका कामदारसंग साँढे चार लाख रुपैपा माग गरेको छ र प्रोसेसको लागि भन्दै कामदारसंग एक लाख रुपैयाँ समेत लिइ सकेको छ । तर उस्ले त्यसको कुनै भर्पाइ दिएको छैन ।
खुलमखुल्ला रुपमा सरकारलाई चूनौति दिँदै आएका म्यानपावर कम्पनीहरु पत्रिकामा त यसो भन्नु भएको छ नी भनेर उनीले प्रकाशन गरेको विज्ञापन देखाउँदा त्यो त देखाउनका लागि मात्र हो । हामीले मात्र होईन सबैले यसै गर्ने हो भन्ने जवाफ दिन्छन् ।
सरकार एउटा निर्णय गर्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ की छैन भन्ने विषयमा कुनै जानकारी राख्दैन । यता म्यानपावर कम्पनीहरुल गरिब नेपाली कामदारहरुसंग मनलाग्दी पैसा असुली रहेको छ ।